राेचक संसार Archives • raradiodarpan.com
किन हानीकारक छ ओरल सम्पर्क ?
काठमाडौं । पछिल्लो पुस्ता माझ ओरल सेक्स (मुख मैथुन)ले प्राथमिकता पाउँदै गएको छ । तर यसले विभिन्न रोग तथा संक्रमणको जोखिम बढाउने गर्दछ । ओरल सेक्सले खतरनाक गोनोरिया पैदा गर्दछ । डब्लूएचओ अनुसार गोनोरियाको उपचार कठिन हुने र कतिपय अवस्थामा असम्भव हुनसक्छ । गोनोरियाबाट...
काठमाडौं । एउटा अनौठो घटनामा न्युजिल्यान्डका एक व्यक्तिले आफ्नो कानभित्र साङ्लो पसेको तीन दिनपछि थाहा पाएका छन् । कानमा सलङ सलङ गर्न थालेपछि जान विडिङले सुरुमा कानभित्र पानी पसेछ भन्ने अनुमान गरे । किनकी तीन दिनअघि उनी एउटा स्थानीय स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्न गएका...
काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा मेपंची एकदमै भाइरल भएकी छिन ! विभिन्न सामाजिक संजाल मा उनको फोटो बाट नया अकाउँट बनाएर उनकै फोटो हरु अप,लोड गरि नेपालि जस्तै बनाउने हरु को कमि छैन यो क्रम पछिल्लो समय एकदमै बढ्दै गैरहेको छ। अका,उन्ट बनाएका...
सानो सानो कुरामा किन छिट्टै भाबुक हुन्छन यी राशिका महिला !
हामी राम्ररी जान्दछौँ कि केटीहरू स्वभावै नम्र छन्। साना चीजहरूमा आँसु बगाइहाल्छन्। तर आज हामी केहि राशि चिन्हहरूको बारेमा बताउन जाँदैछौं कि त्यस्ता केटीहरू जुन रुने क्रममा अग्रणी छन्। तिनीहरू धेरै सजिलै चित्त दुखउछन् र यसको बारेमा धेरै सोच्दछन्। तर तिनीहरू अरूलाई आफ्नो भावनाको...
मलाई जिन्दगी भर माया गर्ने साथ नछोड्ने जिबन साथीको खोजीमा…
विज्ञापन:-म साधारणा लेखपढ भएको एउटा गाउको केटी हु ।मेरो घर पूर्वको दमकमा पर्दछ । हाल म काठमाणडौ मा बसोबास गरेर म काठमाणडौमा पढदैछु बेचलर रनिङमा छु । मेरो पढाइको विषय मेनेजमन्ट विषयमा पढछु त्यस कारण जापानजानको लागी मैले लगभग सम्पुर्ण तयारी गरी सके त्यस...
काठमाडौं । टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जमाइ राजा २ ०’ बाट चर्चामा आएकी नायिका निया शर्मा फेरि छाएकी छन् । ‘हट एण्ड बो’ल्ड अवतारका कारण उनी पुन: चर्चामा आएकी हुन् । ‘मैले कहिले पनि कालो जादुमा विश्वास गरिनँ।’ तर उनको कालो पहिरनले भने फ्यानको मनमा जादु...
एजेन्सी । पुरुषको तुलनामा महिलाको शारीरिक बिहे लगत्तै नै परिवर्तन भइहाल्छ । के कारण छ त्यसको पछाडी ? सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्स का सोधकर्ताले हालै गरेको अध्ययनका अनुसार नियमित सेक्स गर्ने महिलाको शारीरिक बनावट केही मात्रामा परिवर्तन भए पनि एक दिनमा नै पटक पटक...
काठमाडौं । मानिसहरु आफ्नो जिविकापार्जनको लागि आ आफ्नो पेशा ब्यापार ब्याबसाय आदी गर्नु नै पर्दछ । तर कतिपय पेशा जागीरहरु आफ्नो इच्छाएको भए पनि अलिक गाह्रो हुने गर्दछ । जस्तै महिला यौन स्वास्थ्यकर्मि तर पुरुष मान्छे आफ्नो समस्या लिएर महिला डाक्टरलाई भेटन गए भने...
काठमाडौं । रुकुम पश्चिम, बाँफिकाेट गाउँपालिका १० का ३६ बर्षीय भिम बहादुर बुढाकाे ह त्या भएको प्रारम्भिक अनु सन्धान बाट खुलेको छ । नेपाली सेनाको ज्वालादल गण जाजरकोटमा कार्यरत भिम बहादुर केहि समयको लागि घर बिदामा आएको समयमा उनकै श्रीमतीले ह”त्या गरि भिरमा खसाएकाे...
एजेन्सी। हरेक ब्यक्तीले आफ्नो यौन जीवन सुखद होस् भन्ने कामना गर्दछन् । यसका लागि उनिहरुले अनेक प्रयत्न पनि गर्दछन् । अहिलेको समयमा याैन उत्तेनाको लागि अनेक अाैषधिसमेत उपल्बध् छन । यस्तै एक जोडिले शारिरीक सुखका लागि पहिले औषधीको सेवन गरेर शारिरीक सुखको कार्यमा रहे...